कमल र चन्दा अभिनित " आज पनि तिम्रो याद " रिलिज ( भिडियो ) - Kanchanjangha Online
कमल र चन्दा अभिनित ” आज पनि तिम्रो याद ” रिलिज ( भिडियो )
काठमाडौं । गायक डीबी तामाङ नेपाली संगीतमा नयाँ नाम पक्कै होइन । गायक तामाङले सन् २०१४ मा ” एउटा तारा ” नामक एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तेस्पश्चात सन् २०१५ उनले ” बुद्द संदेश भाग २ ” सार्वजनिक गरेका थिए । उनले गाएका ” उहिले हामी “, ” निलो निलो ” , ” तिमी बिना ” बोलका गीतहरु सोर्ता दर्शकले सुनिसकेका छन् ।
हाल अमेरिकामा भएका गायक तामाङले केहि दिन अघि मात्रै ” आज पनि तिम्रो याद ” बोलको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । आज पनि तिम्रो याद बोलको सेण्टिमेन्टल भर्सनको यस गीतमा स्वर डीबी तामाङको रहेको छ भने शब्द लक्की राशिको रहेको छ । गीतमा संगीत चर्चित संगीतकार बसन्त सापकोटाको रहेको छ । गीतको एरेञ्ज्मेण्ट साहस शाक्यले गरेका हुन ।
रमणीय ठाउमा छायांकन गरिएको यस गीतको भिडियोलाई बाशु बरालले खिचेका हुन । बिष्णु खड्काले भिडियो सम्पादन गरेका हुन । कमल सिंह , चन्दा दहाल , आकाश ईडोको अभिनय रहेको भिडियोलाई बिक्रम दहालले निर्देशन गरेका हुन । सन् २०१९ मा आफ्नो नयाँ एल्बम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका गायक तामाङको आफ्नै अफिसीएल युट्युब च्यानल मार्फत भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
« आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी साचेको सपना पुरा भयो ! सुभद्राको रुवाइ हैन खुसी आयो! (भिडियो सहित) (Previous News)
(Next News) अभिनेत्री मास्केले रोजिन् ‘दी पोश आउटफिटर्स’ नक्सालमा खुल्यो ‘दी पोश आउटफिटर्स’ »